Our services-Apicmo biochemical cdmo vatori
APICMO ikambani yemishonga inonyanya kuzivikanwa pakati pevanhu vanokosha pakati pekutsvakurudza kutsva nekukudziridzwa kwevecology.
Tiri kupa hutsika hunobudirira nekugadzirisa maitiro.
kubudisa mashoma nemamwe mabasa ekutsvakurudza nezvemishonga nekukudziridza masangano uye makambani emishonga
APICMO inogona kupa zviyero zvinotevera, izvo zvose zvinotsigirwa nemitemo yedu yakasimba pamusoro pekuchengetedzwa kweIntellectual Property (IP), kuve nechokwadi kuti mapurogiramu anogadziriswa mune zvakasimba zvikuru zvekuvimba nguva dzose.
APICMO yeDrug Discovery is cloud-based, cognitive solution iyo inotsvaga ruzivo rwezvesayenzi uye deta kuratidza kuzivikanwa nekuzivikanwa kwakavanzika kunogona kubatsira kuwedzera mikana yekubudirira kwesayenzi.
Kwemakore gumi apfuura, APICMO yave iri kupa huwandu hwetsika yekutanga uye yekugadzira maitiro. Nhare yedu yebasa inogona kubva pamabhirigiramu maduku emadhora kusvika kune matani emabasa makuru ekugadzira.
Yedu yemakemikari inosimudzira tende, yakagadzirwa kune anopfuura 50 masayendisiti munyika dzedu, inodarika zvinotarisirwa kunyange kunyange mapurojekiti akaoma. Kushanda mu-state-of-the-art laboratories yakagadziridzwa nekugadzirwa kwezvino uye kuongorora instrumentation.